काठमाडौं, ९ माघ: १ हजार ४ सय ६२ विन्दुदेखि शुरू भएको नेप्से ३ दशमलव २८ अङ्कले बढेर परिसूचक १ हजार ४ सय ६५ दशमलव ८४ विन्दुमा पुगेको छ । आइतवार नेप्से शून्य दशमलव २२ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएका विकास बैङ्क, जलविद्युत र वित्त कम्पनी बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से उकालो लागेको हो । दिनभरको व्यापार अवधिमा १ सय ३२ कम्पनीले २ हजार ६ सय ५४ पटकको व्यापार अवधिमा रू. २९ करोड ९१ लाख बराबरको रकम कारोबार भएको छ भने ७ लाख २९ हजार ८ सय कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
यस व्यापार अवधिमा उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको परिसूचक १ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तैगरी, होटल समूहको शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत, बैङ्किङ समूहको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत , ‘अन्य’ समूहको शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत र बीमा कम्पनीको परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले बढेको छ । यसका साथै, जलविद्युत कम्पनीको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको शून्य दशमलव ६१ र विकास बैङकको शून्य दशमलव १६ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन सबैभन्दा बढी प्रभु बैङकको संस्थापक शेयरको रू. ६ करोड ३ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । उक्त संस्थापक शेयरको यस दिनको अन्तिम शेयर मूल्य रू. २ सय १ रहेको छ । । यसको १ पटकको व्यापारमा ३ लाख कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । साथै, नेपाल एसबीआई बैङ्क, सिद्धार्थ बैङ्क, प्रभु बैङ्क र नेपाल लाई इन्स्योरेन्सको रू. १ करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको हो । सो दिन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १३ हजार ६ सय ९१ पुगेको छ । ग्रीन डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर मूल्य भने ७ दशमलव ३० प्रतिशत घटको छ ।